Bit By Bit - Intshayelelo - 1.2 Wamkelekile ubudala yedijithali
Iminyaka yobudala lwedijithali kuyo, loo nto likhula, kwaye itshintsha oko kunokwenzeka kubaphandi.
Nesindululo ngundoqo kule ncwadi kukuba ubudala yedijithali idala amathuba amatsha zophando lwentlalo. Ngoku abaphandi ukujonga ukuziphatha, buza imibuzo, imifuniselo ukubaleka, nokusebenzisana ngeendlela nje akunakwenzeka ngaphambili kakhulu yakutshanje. Kunye nale amathuba amatsha kwakhona kuza imingcipheko ezintsha; Ngoku abaphandi banokubenzakalisa abantu ngeendlela kwanzima ngaphambili kakhulu yakutshanje. Umthombo la mathuba kunye neengozi na inguqu ukusuka analog ubudala ngonaphakade yesuntswana. Olu tshintsho khange kwenzeke konke konke-kanye kanye ukukhanya-iswitshi ajikele-yaye, enyanisweni, yenguqu alukapheli. Kodwa ke, eli nqanaba siyibonile ngokwaneleyo ukwazi ukuba kukho into enkulu eyenzekayo.
Enye indlela phawula lo inguqulelo ukukhangela utshintsho kubomi bakho bemihla ngemihla. izinto ezininzi ebomini bakho ekwakufudula Analog ngoku yesuntswana. Mhlawumbi kusetyenziswa ukusebenzisa ikhamera bhanya kwaye ngoku ukusebenzisa ikhamera yedijithali (leyo mhlawumbi yinxalenye yefowuni yakho yesuntswana). Mhlawumbi kusetyenziselwa ukufunda iphephandaba emzimbeni kwaye ngoku ufunda iphephandaba online. Mhlawumbi kusetyenziselwa ukuhlawula izinto nemali emzimbeni ngoku ayihlawule ikhadi ngetyala. Kwimeko nganye, utshintsho ukusuka analog digital ithetha ukuba ulwazi olungaphezulu ngoku zifakwe ngokwamanani.
Enyanisweni, xa wawajonga ngokomyinge, iziphumo inguqu zezi emangalisayo. Isixa ulwazi ehlabathini yanda ngokukhawuleza kwaye ngaphezulu ukuba iinkcukacha zigcinwa ngokwamanani, leyo lula uhlalutyo, ukudluliselwa, kwaye kudibanisa (Figure 1.1) (Hilbert and López 2011) . Konke oku ulwazi yedijithali lifikile ukuba kuthiwe "data ezinkulu." Ukongeza koku dubulo data lwedijithali, kukho ukukhula ngokunxuseneyo kufikelelo kwethu amandla computing (Figure 1.1) (Hilbert and López 2011) . Ezi ntsingiselo-ukwandisa ulwazi yedijithali nokwandisa computing-bonisa akukho umqondiso zokuyekelel phantsi.
Isazobe 1.1: yokugcina ulwazi namandla becomputing ziyanda kakhulu. Ngaphezu koko, yokugcina ulwazi ngoku phantse digital (Hilbert and López 2011) . Olu tshintsho ukudala amathuba eningenakukholwa kubaphandi zentlalo.
Ngeenjongo zophando zentlalo, Ndikubona Eyona nto ibalulekileyo ubudala lwedijithali iikhompyutha yonke indawo. Ekuqaleni noomatshini igumbi-onokufikelela zazifumaneka kuphela ukuba oorhulumente kunye neenkampani ezinkulu, iikhompyutha baye rhoqo wokunciphisa ngobukhulu nikhulela popularity. Leminyaka ngalinye ukususela 1980, siye sabona uhlobo olutsha lwe computing ivelayo: iikhompyutha zobuqu, laptops, smart phones, nezinto zokwenza ngoku lilungiswe (oko kukuthi, iikhompyutha ngaphakathi izixhobo ezifana neemoto, uphaphileyo, mostat) (Waldrop 2016) . Isanda ezi iikhompyutha ubiquotous kwenza ngaphezu ukubala nje; ke ukubona, ukugcina, kunye nokudlulisela ulwazi.
Kubaphandi, imiphumela iikhompyutha yonk 'kulula ukubona intanethi, kwindawo elilinganisiweyo ngokupheleleyo kwaye efanele ukulingwa. Umzekelo, online store lula ukuqokelela idata kakhulu ngqo malunga ezivenkileni nokuthengwa iipateni ezigidi abathengi. Ngaphezu koko, i online store lula ndomize abanye abathengi ukuba bafumane amava othengela omnye kunye nabanye ukuba ufumana esinye. Le ukukwazi ndomize phezu umkhondo kuthetha ukuba kwiivenkile ngekhompyutha rhoqo ukubaleka imifuniselo elawulwayo cala. Enyanisweni, ukuba ndiye Wakhe wathenga nantoni na evela online store ukuziphatha wakho sele zilandelwe yaye sele phantse ngokuqinisekileyo ibe nxaxheba ulingelo, ubusazi ukuba okanye hayi.
Eli hlabathi ngokupheleleyo-kulinganiswa-ngokupheleleyo-randomizable azihambi nje intanethi; Kuye kusiba kwenzeka kuyo yonke indawo. igcina Physical sele ukuqokelela idata lokuthenga eneenkcukacha kakhulu, yaye nokuphuhlisa izakhiwo ukuze esweni abathengi ezivenkileni ukuziphatha kwaye dibanisa nokulinga abalufumeneyo kushishino yesiqhelo. Ngamanye amazwi, xa ucinga kubudala yedijithali ukuba kufuneka ucinge nje-intanethi, kufuneka ucinge yonke. ubudala Digital uphando loluntu iya kuquka abantu ngokusebenzisa izithuba digital ngokupheleleyo kwaye iya kuquka abantu abasebenzisa izixhobo ezisebenza ngekhompyutha ehlabathini.
Ukongeza ngokuvumela nokulinganiswa ukuziphatha engakhethiyo unyango, ubudala lwedijithali wamnceda iindlela ezintsha abantu ukunxibelelana. Ezi iintlobo ezintsha zonxibelelwano kuvumela abaphandi ukuba baqhube uphando ezintsha kunye nokudala intsebenziswano ubunzima kunye noogxa babo noluntu ngokubanzi.
A kuNowa ezintama ukuba akukho nanye kwezi zakhono zi ezintsha ngokwenene. Oko kukuthi, ngaphambili, kukho ezinye inkqubela enkulu ubuchule babantu ukunxibelelana (umzekelo, Telegraph (Gleick 2011) ), kunye neekhompyutha ubufumana ngokukhawuleza nama ngezinga elifanayo ukususela 1960 (Waldrop 2016) . Kodwa, yintoni le kuNowa ilahlekile kukuba ngexesha elithile ngaphezulu efanayo uba into eyahlukileyo (Halevy, Norvig, and Pereira 2009) . Nantsi into njengo endizithandayo. Ukuba idatha umfanekiso ihashe, ngoko unaso ifoto. Ke, ukuba sifake 24 imifanekiso ihashe yesibini nganye, ngoko unaso kwimovie. Kakade, imovie nje iqelana iifoto, kodwa kuphela Ndisemathidala die hard basenokubala imifanekiso eshukumayo ziyafana.
Abaphandi kwinkqubo yokwenza utshintsho lifana kwinguqu ukusuka ukufota ukuya mgangatho. Le utshintsho akuthethi akuthethi ukuba yonke siye sakufunda ngaphambili kufuneka kuhoywa. Kanye njengoko imigaqo ukufota ukwazisa imigaqo lesinqumleli, ngemigaqo yophando lwezentlalo elidlulileyo iya kwazisa ngophando yentlalo elizayo. Kodwa, yenguqu kwakhona kuthetha ukuba kufuneka siqhubeke sisenza into efanayo. Kunoko, kufuneka ukudibanisa iindlela zangaphambili kunye zizakhono zangoku nezizayo. Umzekelo, uphando Blumenstock kunye noogxa umxube yophando uphando bemveli noko abanye kubiza inzululwazi data. Zombini ezo izinto ezo eziyimfuneko: inokuba i iimpendulo kuphando okanye iirekhodi ifowuni ngokuthi ngokwabo kwakwanele. Okuninzi ngokubanzi, ndicinga ukuba kusiba abaphandi zentlalo kuya kufuneka ukudibanisa inzululwazi yoluntu nenzululwazi idatha ukuze akwazi ukuxhamla amathuba ephakade yesuntswana. Ukuqhubekeka kuphela ukuthatha imifanekiso xa Kwakhona kuba senza bhanya kuba yimpazamo.